‘सामान खरिद गर्दा एक वर्ष होइन, एक पुस्ता सोचौँ ।’ युवा पस्मिना व्यवसायी श्रेष्ठ « Kathmandu Television HD
एनपिआइ कलेक्सनका प्रोपाइटर सुनिल श्रेष्ठ पछिल्लो समयका आशा लाग्दा युवा व्यवसायी हुन् । हातैले बनाएर तयार गरिएका पस्मिनाका सामग्री यस इन्डस्ट्रीका थप विशेषता हुन् । यी नै इन्डस्ट्री परिचित युवा व्यवसायी श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सार सङ्क्षेप
व्यापारको दुनियाँमा तपाइको प्रवेश कसरी भयो ?
मेरो बुबा ३५ वर्ष अघि देखि यसै पेसामा रहनु भयो । ६ वर्ष अघि मैले केही नयाँ गर्न चाहेँ । यही चाहना सहित बुवाकै कम्पनीको एउटा हिस्सा मैले सम्हाले ।
कम उमेरमै व्यापारको सोच कसरी आएको हो ? बताइदिनु न
म पस्मिना देखेर नै हुर्केको हुँ । रातको १२ ,एक बजेसम्म बसेर पस्मिनाको काम देखेको छु । मैले यसलाई नयाँ सोच भने आफैले दिए । सबैले मेसिन रुपैयाँ गर्न थाले । मैले ढाकालाई युरोपेली र अमेरिकी स्वरूप तिर्दै फ्युजन पनि दिए । यसको कारण के हो भने यो नयाँ स्वरूपको ढाकाको सोच अघि बढायौ । यो हेर्दा राम्रो मात्र होइन, औपचारिक , अनौपचारिक सबै स्थानमा यो लुगा सुहाउँदो हुन्छ ।
‘ र मेटेरियल ’ कसरी व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ ?
हामीले चीनबाट सामान ल्याउने गरेका छौ । नेपाली च्याङग्राको रौँ निकाल्दा चायाँ लगायत केही फोहोर हुने र सफा बनाउन कठिन हुने भएको हो । यस कारण हामीले चीनबाट नै लेराउने गरेका छौ ।
आखिर पस्मिनाको विशेषता के देख्नु भयो ? ग्राहकहरूलाई पस्मिना किन प्रयोग गर्नु पर्छ भन्नु हुन्छ ?
यसलाई विदेशमा कस्मिर भनिन्छ । यो बहुमूल्य मानिन्छ । यसलाई इज्जत र सानको प्रतीक पनि मानिन्छ । यसै कारण यो महँगो हुन्छ ।
महँगोको कारण चाही के हो ? उपयोगी या ‘ र मेटेरियल ’ महँगो भएर ?
र मेटेरियाल पनि महँगो नै छ । तर, यसको मूल्य यत्ति भन्ने छैन । विदेशमा १सय २० देखि २ सय २० डलरसम्म पर्छ । हामी कहाँ ५० डलरबाट सुरु हुन्छ । ‘ र मेटर , कामदारको खर्च, लगानी । यी सबै हिसाब गर्दा हामीहरूको मूल्य महँगो होइन । हो हामी कहाँ पनि सस्तोमा पाइन्छ । तर, पस्मिना प्रयोग गरे पछि पुस्ताका लागि हो । एक या दुई वर्षका लागि होइन । यस कारण पुस्ताकै लागि प्रयोग गरिने यो सामग्री महँगो भन्ने मलाई लाग्दैन ।
यो पेसामा सफलता पाउँदै गर्दा अन्य वैकल्पिक पेसाको बारे सोच्नु त भएको छैन ?
मैले कहिले पनि सोचेको छैन । हो यसलाई फराकिलो बनाउने चाहना पक्कै छ । आज मेरो व्यवसायका कारण २२ जनाले रोजगार पाएका छन् । यसलाई बढाएर अझ धेरै बनाउन मन त लागी नै हाल्छ । हाम्रो उत्पादन जापान, अमेरिका,युरोप र चीनका केही ठाउँमा पनि जान्छ । उत्पादनको मात्रा बढाउने र निर्यात पनि बढाउने मेरो चाहना हो । म के कुरामा गर्व गर्छु भने चिनिया बजारमा उत्पादन भएको सामान संसार भर पुग्छ । तर, हामीले उत्पादन गरेको सामग्री चीनमा पुग्ने गरेको छ । मेरो चाहना भनेको एउटै डुङ्गामा दुईवटा गोडा राख्ने हो ।
बुबाको पथलाई पछ्याउँदै तपाइ यो पेसामा लाग्नु भयो ? बुबाको पथलाई निरन्तरता दिनु भयो या अन्य केही गनुृ भयो ?
मेरो बुबा पुष्पमान श्रेष्ठ शिक्षक हुनु हुन्थ्यो । सञ्चार उद्यमी पनि । नेपाल पस्मिना सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनु भयो । उहाँले मलाई एउटा कुरा सिकाउनु भयो । कुनै व्यापारमा पुरै समय दिन पर्छ भन्ने छैन । त्यसमा निश्चित समय दिएर अलि फरक किसिमले दिमाग लगाउँदा राम्रो हुन्छ । जस्तो म पनि दिनभरि कारखानामा बस्ने, या दिन भर सो रूपमा बस्ने गर्दिन । अन्यत्र लाग्दा केही मान्छे भेट्दा पनि मार्केटिङको काम हुन्छ ।
सरकारले एकाएक आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गर्ने गरेका कारणले थुप्रै व्यवसायीहरू डुबेका छन् । तपाईँहरू चाहिँ कत्तिको सुरक्षित हुनु हुन्छ ?
यो देशमा सुरक्षाको प्रश्न गम्भीर हो । उदाहरणको लागि डेंगुको कारण थुप्रै देशका पर्यटक घट्दै छन् । सरकारलाई यसको चासो छैन । जबकि पर्यटक आउने समय भनेकै सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर र डिसेम्बर प्रमुख महिना हुन् । हामी कहाँ समस्या छन् । तर, यसको मतलब काम त गर्नै प¥यो । यसै अवस्थालाई स्वीकार गरेर हामीले काम गरेका छौ । तर, अन्य केही व्यवसायमा जस्तो राज्यको नीति परिवर्तन भए सबै डुब्छ की भन्ने जोखिम हामी कहाँ हुँदैन ।
सरकारसँग मैले भन्न चाहने के हो भने अहिले निर्यात गर्दा १.७५ प्रतिशत इन्सेन्टीभ दिएकोमा त्यो बढाएर ७ या आठ प्रतिशतसम्म भए हुन्थ्यो ।
तपाइका अन्य रुचि र चासोका विषय र सामाजिक गतिविधि चाही के हुन् नि ?
म पहिले फुटबल र स्नुकर खेल्थे । भ्रमण मेरो रुचि हो । सामाजिक काममा रूपमा मैले अहिले एक जना दुखित महिलाको छोरालाई पढाएको छु । यसलाई बढाएर दुई तीन जना बच्चा पढाउने सोचमा छु । मेरो सोच के छ भने अब एउटा पिस मा एक डलर बचाएर त्यो सामाजिक काममा लगाउने भन्ने छ ।
अन्त्यमा पाठकहरूलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
म सबैलाई एउटै कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु । पस्मिना उद्योग व्यवस्थित रहोस् भन्ने हो । ग्राहकहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँ पस्मिना प्रयोग गर्नु हुन्छ भने एक हजार या १५ सय रुपैयाँको मुख नहेर्नुस् । तपाईँ अलि सस्तोमा सामान किनेर एक वर्ष पनि उपयोग नगर्नेकी एक दुई हजार बढी मूल्य तिरेर पुस्तासम्म उपयोग गर्ने त्यो प्रमुख हो ।
एनपिआइ कलेक्सनका उत्पादन, मुख्य पसल ठमेल, नागरिक लगानी कोषको ठिक अगाडी
काठमाण्डौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रवक्तामा सन्तोष प्रसाई नियुक्त भएका छन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स